Wax walba oo ku saabsan Exemestane
1. Waa maxay Exemestane? Sidee u shaqeysaa? 2. Sidee buu u shaqeeyaa Exemestane?
3. Isticmaalidda Isticmaalidda 4. Qiyaasta Cabbiraadda
5. Natiijooyinka tijaabada ah 6. Nolosha nuska ah ee nuska ah
7. Dhibaatooyinka xasaasiga ah ee maskaxda 8. Gargaarka Exemestane
9. Dib-u-eegista Abbaaraha 10. Exemeste for sale
11. Exemeste si loo daaweeyo kansarka naasaha ee dumarka
1.Waa maxay Exemestane? Sidee u shaqeysaa?
Exemestane (107868-30-4) waa daroogo afka ah oo loo isticmaalo daaweynta noocyada gaarka ah ee kansarka naaska sida kansarka naasaha hormoonka-hormoonka-hormoonka. Daawada ayaa badiyaa loo adeegsadaa daaweynta kansarka haweenka ka dib markii caado wadata. Exemestane (107868-30-4)Waxa kale oo ay door muhiim ah ka ciyaareysaa ka hortagga soo noqoshada kansarka ee bukaanada. Caadi ahaan, kansarka naasaha qaarkood ayaa kiciya hormoonada estrogen. Daroogadaasi waxay ka caawisay malaayiin qof oo bukaan ah oo qaba cudurrada qaarkood ee kansarka, dhakhtarkuna wuxuu kuu qori doonaa daawada ka dib markaad eegto xaaladdaada. Daroogadani waxay u shaqeysaa hoos u dhigida heerarka hoormoonka oososta ee jirkaada, kaas oo ka caawiya dhimista iyo ka celinta saameynta kansarka naasaha.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo inkastoo daroogadani ay tahay baadhitaan weyn oo kaa caawinaysa inaad xakamayso kansarka naasaha, haweenka ku jira da'da ilmahooda ayaa ka niyad jabsan in ay isticmaalaan. Daawada ayaa loo isticmaali karaa dawooyinka kale sida goserelin (Zoladex) ama wax kasta oo kale iyada oo ku xidhan xaaladdaada. Isticmaalka daroogada iyadoon dhakhtar qoreynin waxay keeni kartaa waxyeelo daran, sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa inaad had iyo goor tagto baaritaanka caafimaadka intaadan bilaabin isticmaalka. Daroogada ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan sida Aromasin laakiin mawduuca, iyo qiyaasta ayaa isku mid ah. Daawadaadu waa inay kugu hagaajineysaa nidaamka oo idil ka iibsashada isticmaalka.
Waxaad daawada ka iibsan kartaa internetka ama laga iibsan karo qof kasta oo ku qanacsan. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar yeelatid marka aad iibsanayso daawo kasta maxaa yeelay waxaad si sahlan u heli kartaa alaabta been abuurka ah ee aan keeni karin natiijooyinka aad rabto. Waxaan ka wada hadli doonnaa sida iyo meesha laga iibsanayo tayada ugu fiican iyo tayada "Exemestane" ee dambe ee maqaalkani.
2.Sidee buu u shaqeeyaa Exemestane?
Sida kor ku xusan, daawadani waxay u shaqeysaa yareynta ama yaraynta wax soo saarka hoormoonka estrogen ee jirkaaga. Hormoonkani waa kobcinta horumarinta kansarka naasaha, iyo marka wax soo saarkoodu yar yahay, waxay ka dhigan tahay in aad kantarooli lahayd koritaanka cudurka. Si kastaba ha ahaatee, daawadani waxay waxtar u leedahay oo keliya waxqabadka habka loo yaqaan 'estrogen receptor positive' (ER +) ee kansarka naasaha. Taas macnaheedu waa, haddii kansarka naasahaagu yahay hoormoon xasaasiyadeed hormoon, Exemestane kuma caawineyso inaad xakamayso cudurka. Sidaa daraadeed, ma aha in kansar kastaa la daaweyn karo iyada oo la isticmaalayo daawadan.
Estrogen waa hormoon jinsi ah oo kaalin muhiim ah ka qaadata taranka dumarka, taasina waa sababta ay haweenku ubadkooda u qaadanayaan caado-ba'an ay ka niyad jabaan isticmaalka daroogada. Haddii aad ka tirsan tahay qaybtan, markaa dhakhtarkaagu waa inuu kuu soo jeediyaa daawo kale oo kansarka naasahaaga ah haddii aadan qorsheyneynin inaad mar kale dhalaysid. Ootrogen-hooseysa macnaheedu waa inaadan awoodin inaad noqoto mid wax soo saar leh sida haweeney, sidaas darteed waa muhiim inaad qaadato baadhitaan caafimaad inta aadan bilaabin isticmaalka daroogada. Daawadani waxay ka mid tahay daawooyinka loo yaqaan 'aromatase inhibitor' ee daawooyinka
Kani waa daroogo afka ah oo loo isticmaalo daaweynta noocyo gaar ah ee kansarka naasaha. Ka sokow, Exemestane (107868-30-4) ayaa sidoo kale loo isticmaalaa ka hortagga kansarka naasaha oo ka imanaya daaweyn ka dib. Cudurka Exemestane waxaa isticmaala bukaannada kansarka naasaha ee daawada loo yaqaan 'tamoxifen' oo loogu talagalay sanadada 2-3 iyo iyadoon wax horumar ah la sameynin. Daawadan waxaa badanaa la siiyaa bukaannada kansarka naasaha ka dib markii qaliinka la mariyo si loo yareeyo fursadaha cudurku mar labaad ku jirayo jirkaada. Haddii aad qaadatay shucaac ama daaweynta kemotherabi, dawadaada ayaa kugula talin doonta waqtiga ugu wanaagsan ee aad ku bilaabi lahayd Exemestane.
Dhanka kale, Exemestane waxaa loo isticmaalaa daaweynta ugu horreysa ee noocyada kansarka naasaha ee gaarka ah. Marxaladda hore ee kansarka naasaha, dhakhtarku wuxuu kugula talin doonaa inaad isticmaasho daroogadan marka xaaladdu aysan ka sii darin, iyo marka aysan u baahneyn qalliin. Mararka qaarkood daroogada ayaa sidoo kale la siiyaa bukaanada si loo yareeyo kansarka naasaha weyn ka hor inta aan la gelin nidaamka caafimaadka qalliinka. Daawadaadu waxay noqon doontaa qofka ugu fiican ee kugula talin doona waqtiga ugu fiican ee aad qaadato daawadan markaad eegto xaaladdaada kansarka naaskaaga.
Daawada ayaa sidoo kale loo qoraa si loogu caawiyo haweenka qaba kansarka naasaha, taas oo ka sii dartay markii ay dhalatay markii ay qaadanayeen tamoxifen. Daroogadu waxay hoos u dhigtaa heerarka hoormoonka estrogen, kaas oo ka caawiya joojinta burooyinka naaska ee u baahan hormoonka horumarinta. Dumarka, marxaladaha hore ee kaansarka naasaha ee ku dhaca miyir-qabadkooda, waxay sidoo kale isticmaali karaan daroogada si ay uga caawiyaan xakameynta cudurka. Mararka qaarkood daroogada waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo kansarka naasaha dumarka aan weli dhalan, laakiin had iyo jeer la hadal dhakhtarkaaga ka hor inta aadan bilaabin Exemestane.
Kani waa daroogo afka ah waana inaad qaadataa hal kiniin ah 25mg hal mar maalintii cuntada kadib. Qiyaasta daawadu waa mid joogto ah oo loogu talagalay dadka bukaanka qaba kansarka naasaha iyo kuwa hore. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in aad qaadato daawada isla wakhtiga maalin kasta natiijooyin wanaagsan. Hubi inaad raacdid dhammaan tilmaamaha dhakhtarka inta lagu jiro mudada qiyaasta oo dhan. Ha qaadin wax ka yar ama ka badan waxa ku qora daawadaada. Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama dareen ah la tasho dhakhtarkaaga inta aadan bilaabin qaadashada qiyaasta. Dhakhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa in aad qaadato Exemestane dhowr sano ama xitaa wakhti dheer.
The Qiyaasta Cabbiraadda waa in la qaataa muddo ah oo uu qeexay dhakhtarkaaga illaa muddada ay kuxirantahay xaaladaada kansarka naaskaaga. Caadi ahaan, daroogada waa in la qaataa ilaa shan ilaa toban sano. Mararka qaarkood, bukaanjiifka qaarkood waxay bilaabaan inay qaataan qiyaasta Exemestane ka dib markay qaadato tamoxifen dhawr sano. Si kastaba ha noqotee, haddii dhakhtarkaagu kugula taliyo inaad qaadato daawadan si loo daaweeyo kansarka naasaha oo soo laabtay ama ku faafay qaybaha kale ee jidhkaaga, waxaad qaadan doontaa qiyaasta tijaabada ah ilaa inta uu xakameynayo cudurada hoos yimaada.
Xitaa haddii aad si fiican u fiicnaato, ha joojin qaadashada qiyaastaada adiga oo aan aqoonin dhakhtarkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad dareentid bogsasho, laakiin kansarku wuu baxsadey oo haddii aan si wanaagsan loo daweyn karin dib u soo noqoshada wakhti yar ka dib. Haddii ay dhacdo inaad qadato qiyaasta sababta oo ah hal sabab ama mid kale, maalinta soo socda ma qaadan kiniin dheeraad ah si loo magdhabo, kaliya qaado miiska sida dhakhtarku kugula taliyo maadama Exemestane ee jirkaaga ku filan inuu kugu qaado Maalinta xigta. Si aad u badbaado, marna kordho qiyaasta haddii uusan dhakhtarkaagu ku talineynin taas oo ah dhacdo aad u yar.
5.Natiijooyinka tijaabada ah
Daawadan ayaa la tijaabiyey sanado badan, waxayna cadeeyeen in ay keenayso natiijooyin tayo leh marka loo isticmaalo si sax ah. Sannado badan oo hadda, Exemestane ayaa muhiim u ah daaweynta noocyada kansarka naasaha qaarkood ee haweenka ah si ka badan kuwa ay soo gaadheen cilladahooda. Dhanka kale, daroogada ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in ay awood u leedahay ka-hortagga kansarka naasaha ineey soo noqoto kadib daaweyn ka dib. Natiijada cad ee aad ku raaxeysan doonto ka dib markaad isticmaasho daawadani waxay hoos u dhigeysaa heerarka estrogen, taas oo ah xajinta ugu weyn ee koritaanka kansarka naaska ee jirkaada. Exemeste, marka si haboon loo isticmaalo, wuxuu natiijooyinka wanaagsan u soo bandhigaa dadka isticmaala.
Si kastaba ha noqotee, marka la badiyo ama la isticmaalo iyadoon la-talin ku habboon laga helin daawooyinka waxay keeni kartaa waxyeelooyin daran sida madax-xanuun iyo xitaa xasaasiyad. Sidaa daraadeed, had iyo jeer waa lagama maarmaan inaad u tagto baadhitaan caafimaad kahor, sida aad u sii wadayso qiyaasta iyo kadib. Bukaannada kansarka ayaa lagula talinayaa in ay tagaan baaritaan caafimaad oo joogto ah si ay ula socdaan horumarka daaweynta iyo xaaladda guud ee caafimaadka. Waxaa sidoo kale jira daawooyin kale oo la isticmaali karo Exemestane si natiijooyin fiican leh, laakiin dhakhtarkaagu ayaa kugula talin doona si waafaqsan. Intaa waxaa dheer, hubi inaad u sheegto dhakhtarkaaga wixii xasaasiyad ah iyo markaad la kulanto saameyn horukac ah marka aad qaadaneyso qiyaasta tijaabada ah.
6.Nolosha nuska ah ee nuska ah
Nolosha nuska ah ee nuska ah wuxuu leeyahay 24hrs, taasina waa sababta kaliya ee lagaa doonayo inaad qaadato hal kiniin oo ah 25mg hal mar maalintii. Daawada waxay ku sii jiri doontaa nidaamka jirkaada hana ku sii daa hormoonada hormoonada estrogen sida ugu hooseeysa. Xitaa haddii aad ilowdo inaad qaadato qiyaastaada, ha qaadan qadar dheeraad ah maalinta xigta. Daroogada horay u jirtay nidaamka jirkaaga ayaa kugu filan inaad ku qaadato maalinta ku xigta. Nolosha buuxda waa 48hrs sidaa daraadeed adigu ha u dhaafin naftaada, waxay keeni kartaa waxyeelo daran. Marna ha qaadin xadiga xad-dhaafka ah ama ka yar tan ka mid ah dhakhtarkaaga, iyo xitaa marka dhakhtarkaaga uu soo jeediyo inaad joojiso isticmaalka daroogada, wali wuxuu noqonayaa mid firfircoon nidaamka jidhkaaga.
7.Dhibaatooyinka xasaasiga ah ee maskaxda
Sida dawooyinka kale, Exemestane waxay leedahay hoos u dhac ku yimaada inta badan dadka ay ku fashilmeen inay raacaan tilmaamaha qiyaasta. Haddii aad qaadatid dawadan adiga oo aan tegin baaritaanka caafimaadka, waxa aad u badan tahay inaad la kulanto waxyeelo daran. Dhibaatooyinka iyo xasaasiyadda ayaa ah sababaha asaasiga ah ee saameynta waxyeelada keenta. Tusaale ahaan, daroogada ayaa ku fashilantay inay ku shaqeyso adiga sababtoo ah nidaamka jirkaaga ama xasaasiyad. Tani waa daroogo dhakhtar qoray, oo qaadashada iyada oo aan dhakhtarku aqoon u lahayn taasoo keeni karta saameyn hor leh.
Waxaa jira waxyeelo caadi ah oo caadi ah oo caadi u ah dhammaan dadka isticmaala Exemestane, laakiin waxay baxaan bilaha bilaha ugu horeeya ee qiyaasta. Si kastaba ha noqotee, marka dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ay sii dheeraadaan ama noqdaan kuwo aad u daran, waxay u sheegaan kooxdaada caafimaadka si ay u helaan habka ugu fiican ee loo yareeyo. Dhibaatooyinka guud ee caadiga ah waxaa ka mid ah;
Calaamadaha Menopause maadaama daroogada ay hoos u dhigto heerarka hoormoonka estrogen ee jirkaada taasina waa sababta ay kugula talinayso inaad qaadato daawadan ka dib da'da ilmahaaga. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad dhaleysid caruur ka dib markaad bilowdo qaadashada daawadan.
Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto xanuuno ku dhaca xubnahaaga iyo murqahaada bilaha ugu horeeya ee qiyaasta, laakiin waxay ku dhumaan waqtiga.
Waxaa laga yaabaa inaad dareento niyadjab iyo niyad jab.
Insomnia waa dhibaatooyin kale oo caadi ah oo dadka isticmaala Exemestan la kulma daal, xataa marka aanad shaqayn.
Qiyaasidda lafahaaga ama laf-dhabarkaaga ayaa sidoo kale saameyn kale oo saameysa qaar ka mid ah dadka isticmaala Exemestane.
Waxaa sidoo kale jira saameyno kale oo daran oo ah marka aad la kulantid, waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga isla markiiba ka hor intaan xaaladda sii xumaan. Si kastaba ha noqotee, waxyaabahan soo ifbaxay waxay badanaaba khibrad u leeyihiin qaar ka mid ah dadka isticmaala Exemestane. Waxaa ka mid ah maqaarka iyo timaha isbeddelka, kordhinta heerarka kolestaroolka jirkaada, lakabaadda cuntada, iyo isbeddelada beerka, iyo kuwo kale. Dhibaatooyinka ka yimaada waxyeelada marmarka qaarkood waxay ku xiran tahay sida jidhkaagu uga falceliyo daroogada. Maydka bini'aadamka way adag yihiin, marmarka qaarkoodna daroogada ayaa si fiican kuugu shaqeyn karta, laakiin marka saaxiibkaagu isku dayo, wuxuu keenaa saameyno daran. Way adagtahay in si rasmi ah loo sheego saameynta daawada ee aad ka filan karto markaad isticmaasho daroogada.
Warka fiicani wuxuu yahay in badi saameynta saameynta xun ee Exemestane laga yaabo in la kontoroolo haddii aad u sheegto dhakhtarkaaga waqtigaa. Hase yeeshee, sidoo kale waa doorkaaga inaad hubiso in aad raacdo dhammaan qiyaasta qiyaasta ee bixiyaha soo saaraha iyo dhakhtarkaaga sidoo kale. Sidoo kale, hubi inaad u tagto baaritaan caafimaad oo joogto ah si natiijooyinka wanaagsan. U sheeg dhakhtarkaaga wixii xasaasiyad ah ee aad qabtid ka hor intaadan bilaabin qaadashada qiyaasta. Dhammaan walaaca ka qabo dhakhtarkaaga si aad uga fogaato wixii dhib ah.
Exemestane faa'iidooyinka waxaa inta badan loo yaqaanaa xakamaynta noocyada kansarka naasaha ee dumarka qaarkood. Waxay hoos u dhigtaa heerarka estrogen ee jirka ee looga baahan yahay burooyinka kansarka naasaha si ay u koraan. Dhinaca kale, daroogadu waxay kaa caawineysaa in aad ka hortagto horumarinta mustaqbalka ee kansarka naasaha ka dib markaad qaadato habka qallinka ee guuleysata. In kasta oo tani ay tahay faa'iidada ugu badan ee la isticmaalo ee loo isticmaalo Exemestane, waxaa sidoo kale jira faa'iidooyin kale oo aad ku raaxaysato qaadashada daawadan.
Tusaale ahaan, tani waa daroogada afka, taas oo macnaheedu yahay inaadan la kulmin wax irbad ah intaad qaadanayso qiyaastaada. Daroogadu waxay leedahay nolol firfircoon oo ka mid ah saacadaha 48, iyo haddii aad seegto qiyaasta aanad lahayn wax walwal ah, waxaad u baahan tahay inaad qaadato qiyaasta ku xigta maalinta xigta, aadna u fiicantahay inaad tagto. Daraasaduhu waxay sidoo kale caddeeyeen in Exemestane ay ka caawin karto in looga hortago unugyada jidhka oo ka yimaada oxidation iyo waxyeello bararka ragga iyo dumarka labadaba. Ka sokow, daroogada ayaa la sheegay in ay waxtar u leedahay ilaalinta unugyada jirkaada waxyeelo ay u geystaan ​​DNA-da shucaaca UV inta lagu jiro oksaydhka. Exemestane waxay u adeegtaa sida wakiil sare oo ka hortag ah.
Raadinta kala duwan Dib-u-eegista Abbaaraha, waxaad ogaan doontaa in daroogadani ay khibrad u laheyd isticmaalka kala duwan ee qof qof kale. Si kastaba ha ahaatee, daroogada ayaa leh saameyn cajiib ah iyo tirooyin wanaagsan oo dib u eegis wanaagsan, taas oo macnaheedu yahay in ay ahayd caawimaad aad u wayn oo loo adeegsaday dad badan. Daroogada ayaa lagama maarmaanka u ah caafimaadka adduunka intiisa kale daaweynta iyo xakamaynta noocyada kansarka naasaha ee dumarka qaarkood. Dad badan oo isticmaala daroogada ayaa ammaanay daroogada si ay u noqdaan kuwo awood leh oo yareynaya waxsoosaarka hoormoonka hormoonada ee jirka, kuwaas oo ka masuul ah koritaanka iyo faafidda kansarka naasaha.
Waxaa jira dadka isticmaala daroogada sababtoo ah waa daroogo afka ah oo xoog leh oo keena natiijooyin tayo leh marka loo isticmaalo si sax ah. Inta badan dadka isticmaala Exemestane waxay ku qanacsan yihiin sida daaweynta ay uga caawisay inay maareyso kansarka naasaha. Kuwa kale waxay xaqiijinayaan in daroogada ay qayb muhiim ah ka qaadatay habka daaweynta kansarka naasaha iyo ka hortagga cudurku inuu soo laabto. Dhaqtarka iyo cilmi-baarista cilmiga kala duwan ayaa sidoo kale muujinaya xoogga daawada kansarka naasaha. Marka la soo koobo, boqolkiiba ballaaran ee bukaanka kansarka naasaha ayaa bixiyay dib u eegis wanaagsan oo Exemestane ah iyo qiimeyn heer sare ah.
Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka isticmaala ma helin waayo-aragnimo wanaagsan oo leh daroogadaas waxayna sidoo kale muujinayaan niyad-jabkooda. Waa wax caadi ah in badan oo ka mid ah alaabta badan oo sidaas daroogada ay ku fashilmeen inay u shaqeeyaan qaar ka mid ah dadka isticmaala. Si kastaba ha noqotee, inta badan dadka isticmaala Exemeste ee la kulmay waxyeelo daran ayaa u sabab ah inay ku guul dareystaan ​​in ay ku lug yeeshaan daaweynta geedi socodka oo dhan. Baaritaan caafimaad ayaa muhiim u ah kahor intaanad bilaabin isticmaalka daroogooyinka. Waxa kale oo lagugula talinayaa in aad la xiriirto dhakhtarkaaga isla markiiba aad bilowdo inaad la kulanto saameyno daran oo daran markaad qaadato daawadan. Ku dhawaad ​​dhammaan saameynta daawada Exemestane waa la xakameyn karaa haddii aad u sheegto dhakhtarkaaga wakhti fiican.
Guud ahaan, Exemestane waa daroogo xooggan oo muhiim u ah daaweynta kansarka naasaha dumarka. Habka ugu fiican ee lagu ogaanayo faa'iidooyinka ugu badan ee daroogada waa in lagu dhajiyo qiyaasta lagu taliyey iyo in mar kastaa lug ku yeelato kooxda caafimaadkaaga haddii ay dhacdo inaad la kulanto saameyn heer sare ah. Ha joojin inaad qaadato daawada adigoon adigu talobixin dhakhtarkaaga u sheegin maadaama aad ku guul dareysan karto inaad xakamayso kansarka naasaha, oo ah cudur kedis ah. Mararka qaarkood daroogada ayaa ku fashilantay inay ku shaqeyso, laakiin dhakhtarkaagu wuxuu ku siin doonaa daroogo kale oo saaxiibtinimo u leh nidaamka jirkaaga.
10.Exemeste for sale
Exemeste for sale waxaa lagu iibiyaa magacyada kala duwan ee gobollada ama gobollada kala duwan, magaca ugu caansan ee daawadani waa Aromasin. Waxaad ka iibsan kartaa Exemestane qaybta intarneedka ama farmashiyahaaga ku hareereysan, laakiin hubi inaadan bilaabin inaad qaadato adigoon talo bixin ka helin dhakhtarkaaga. Hubi in adiga iibso budada Exemestane laga soo iibsaday iibiye sumcad leh ama soo-saaraha si natiijo wanaagsan leh. Ma aha mid kasta Alaab-qeybiyaha wax-qabadka waxaad ka heli kartaa internetka lagu kalsoonaan karo. Qaarkood waxay lahaan karaan daawooyin tayo hoose leh ama daroogo caadi ah oo khatar u noqon kara caafimaadkaaga. Raadi dib u eegista macaamiilka si aad kuugu hanato go'aanka saxda ah.
Dhakhtarkaagu wuxuu ku hagaajin doonaa sida loo helo sida ugu wanaagsan ee tayada sare leh ee ka soo baxa iibiye la isku halayn karo oo la aamini karo. Waxaan nahay kuwa ugu wanaagsan ee soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha gobolka, waxaanu samaynaa waqtiyo ku-meel-gaadh ah. Booqo boggayaga internetka si aad u sameysid amarkaaga maanta oo hubso inaad hesho tayada Exemeste ee kaa caawin kara inaad la dagaalanto kansarka naasaha. Boggayaga ayaa ah qof-saaxiibtinimo. Sidaa darteed, waxaad ka dhigi kartaa amarkaaga raaxo leh raaxada gurigaaga. Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama walwal ah, waxaad marwalba nagula soo xiriiri kartaa adoo isticmaalaya emailkeena iyo xiriirada boggeena internetka.
Dhinaca kale, hubso inaad fahamto waxa sharciyada wadankaaga ku saabsan isticmaalka, haysashada, iyo iibsiga Exemestane. Waxaan nahay shirkad sharci leh, mana jeclaan lahayn in aan macaamiisheena u dhigno dhibaatooyin la xiriira sharciyadooda waddanka si ay u soo dejiyaan ama u iibsadaan alaabta tayada sare leh. Tusaale ahaan, Mareykanka iyo Kanada, Exemestane ayaa weli ah daawo kaliya oo daawo ah. Taas macnaheedu waa inaadan iibsan karin daawada haddii aadan haysan warqad dhakhtareed. Hase yeeshee, ma aha sharci daro in la haysto, iibsado, ama isticmaalo daroogada, laakiin Exemestane ma aha daroogada maan-dooriyaha ee labada dal.
11.Exemeste si loo daaweeyo kansarka naasaha ee dumarka
Exemestane waa daawo aad u fiican oo caddeeyey sanadaha soo socda in ay noqoto mid muhiim u ah caafimaadka adduunka daaweynta kansarka naasaha dumarka. Daroogadu waxay u shaqeysaa hoos u dhigida wax soo saarka iyo heerarka hoormoonka estrogen ee jirkaada kuwaas oo mas'uul ka ah koritaanka iyo sidoo kale faafidda kansarka naasaha ee jirkaaga. Daawada ayaa badiyaa ay isticmaalaan haweenka uurka leh ee uurka leh sababtoo ah waxay saameyn kartaa gabdhaha weli ku jira da'da carruurtooda. Exemestane ayaa sidoo kale muhiim u ah ilaalinta dadka isticmaala soo noqoshada ama faafidda kansarka naasaha ka dib markii daaweyn lagu guuleysto. Iyadoo ku xiran xaaladdaada kansarka naaskaaga, dhakhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa inaad qaadato daawadaas daaweyn haddii kansarkaagu uu marayo heerarka hore. Daawadaada ayaa sidoo kale kuu qori kartaa Exemeste si aad u isticmaasho mudo ka hor inta aadan qaadan nidaamka qalliinka.
Waxaa lagula talinayaa in aad qaadato hal kiniin oo ah 25mgs maalintii, taasoo ah qiyaas joogto ah oo loogu talagalay labada sare iyo kuwa bukaanka lagu daaweeyo kansarka naasaha marxaladaha hore. Daawada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dawooyinka kale ee lagama maarmaanka ah ee uu dhakhtarkaagu kugula talin doono. Xusuusnow marnaba inaad kordhiso ama aad hoos u dhigto qiyaasta qiyaasta adiga oo aan la tashanin daawadaada. Haddii ay dhacdo in aad la kulanto waxyeello waxyeelo leh markaad qaadato daroogada la xiriir dhakhtarkaaga wixii caawimaad ah. Qaar ka mid ah saameynada sida madax-xanuun, madax-wareer, iyo matag ayaa caadi noqon kara bilaha ugu horeeya ee qiyaastaada, laakiin haddii ay sii joogaan in ka badan intii caadiga ah u sheegaan jirkaaga. Ku dhawaad ​​dhammaan waxyeelooyinka Exemestane waa la xakamayn karaa haddii aad qaadato talaabooyinka saxda ah oo raac tilmaamaha qiyaasta.
Hagaha Ultimate ee Dihydroboldenone / DHB ee Jidh-dhiska(Wuxuu furan yahay tabare cusub oo cusub)